Akụkọ - Gini bu ihe eji ekpuchi uwa nke uwa dika nkewa uzo uzo?
Kedu ihe valvụ batrị mechiri emezi ka e kewara dịka ụdị ọwa mmiri si asọpụta?
Kedu ihe valvụ batrị mechiri emezi ka e kewara dị ka ụdị ọwa mmiri si asọpụta?
Metal-kaa akara ụwa valvụ
1. Kwụ ọtọ site na valvụ ụwa
Ihe “kwụ ọtọ” na valve zuru ụwa ọnụ bụ n’ihi na njikọta njikọ ya dị n’akụkụ ya, mana ọwa mmiri ya adịchaghị “ogologo”, kama ọ na-emekpa ahụ. Flow ga-atụgharị 90 Celsius iji gafee oche wee laghachi 90 Celsius ịlaghachi na ụzọ mbụ ya. Na valvụ nkedo, ọdịdị ọwa na mpaghara dị iche iche dabere na nha valve na nrụgide nrụgide.
Ọdịdị Z nke eriri a na-ebipụ, ma ọ bụ nnwere onwe na-enweghị ike ịnwụ anwụ ga-ebubata na mbupụ ọdụ ụgbọ mmiri na etiti nke pipeline na akụkụ ụfọdụ, ya bụ ụdị Z na-asọba, ma na-arụ ọrụ mgbe niile iji belata, agbanyeghị warara oghere na mmiri na-agba agba ga-eme ka ọnwụ nke mmiri na-arịwanye elu, na mgbakwunye na ekwesịrị ịdeba na ịtụgharị nnukwu Angle na ọnọdụ ọrụ nke ihe omimi cavitation.
2. Angle ụwa valvụ
Chọpụta azụ na akụkọ ihe mere eme nke valvụ ụwa, mbido mbụ bụ valvụ nke ụwa, wee jiri nwayọ wee ghọọ valvụ ụwa. Ọ bụ ezie na a na-ejikarị valvụ zuru ụwa ọnụ eme ihe taa, Angle gloves valves ka nwere uru ụfọdụ pụrụ iche.
Akụkụ nke ụwa n'akuku na-enye ohere ka mmiri gbanwee 90 ntụpọ ma banye na ala nke oche ahụ mgbe niile. Onye na-agba ọsọ na-emeghe ma na-adịghị emerụ ahụ karịa nke ziri ezi, ya mere enweghi mgbali ọnwụ. Angle ụwa valves na-adịghị mfe eroded site na ihe siri ike. Enwere ike ịhazi diski na mboanuohia ma ọ bụ nke mpekere maka ụkpụrụ kacha mma. N'ihi mgbanwe nke usoro ntụgharị, ahụ ga - emetụta ahụ valvụ ahụ site na mmeghachi omume nke mmiri mmiri. Ike ndị a na-adịkarị obere mana ha nwere ike ịbawanye n'ihi nha valvụ na njupụta mmiri.
Obere ọla kọpa alloy threaded Angle gloves valves na-eji ebe dị ọcha na mmiri. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-arụ ọrụ n'akụkụ ụwa bụ bolnet ụdị, nke e ji ọla kọpa rụọ, ọla kọpa, igwe anaghị agba nchara, na ihe eji arụ ọrụ duplex.
Commondị akụkụ na klas nke nrụgide nke ụwa niile na-abụkarị DN50 ~ 250 (NPS2 ~ 10), Klas 150 ~ 800. N'akụkụ ebe a, a na-ejikarị diski kwesịrị ekwesị belata ihe mmiri axial na-agbanye na azuokokoosisi.
3, valvụ kwụ ọtọ kwụ ọtọ
A na-akpọkwa valvụ zuru ụwa ọnụ dịka valvụ zuru ụwa ọnụ Y ma ọ bụ valvụ zuru ụwa ọnụ, ọ nwere ike ịbụ valvụ kwụ ọtọ na Angle n'etiti steeti. Iji gbanwee ogologo mmiri mmiri na-ata ahụhụ, oghere oche valvụ na mepee ahụ valvụ n'ime akụkụ ụfọdụ, nke mere na ọwa ahụ na-agbazi na-agbatịkwu na axis ahụ, iji belata ọnwụ ọnwụ, yabụ a na-akpọ ya kwụ ọtọ ”. Ihe owuwu a bu ihe a ma ama na otutu ngwa ma jiri ya na uzuoku. Emeziwo ikike ịkwaga ụgbọ njem nke ukwuu, mana ọ dị mkpa iji nlezianya nyochaa ya. Valkpụrụ zuru ụwa ọnụ valves nwekwara naanị otu usoro nduzi. Onye na-agba ọsọ nwere dayameta zuru ezu ma belata dayameta. Adabara pig pigging na-enweghị wepụ bonnet.
Diski na-adịkarị larịị, mboanuohia - a na-eduzi ma ọ bụ na-adọkpụ iji mezuo ihe achọrọ nke ọnọdụ ọrụ dị iche iche. Enwere ike iji profaịlụ dị na ya mepụta ọtụtụ profaịlụ iji mepụta mkpokọta isi na nke abụọ. Ewepụghị diski na mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe mpe akwa nwere ike tinye ya na nhicha iji hichaa oche ahụ tupu akàrà, ma ọ bụ tinye akara roba ka oche ahụ iji meziwanye akara valvụ.
A na-ejikarị valvụ zuru ụwa ọnụ na-agbazi ma na-arụ ọrụ valvụ dị elu. Dịka ọnọdụ ọrụ dị iche iche si dị, enwere ike ịhọrọ ihe pụrụ iche dịka igwe anaghị agba nchara maka imepụta.
4. Atọ atọ ụzọ ụwa valvụ
A na-ejikarị valvụ atọ nke ụwa eme ihe dị ka valvụ nduzi na sistemụ nrụgide dị elu. Dịka ọmụmaatụ, mmiri dị elu na nnukwu nrụgide mmiri na-enye mmiri ọkụ nke ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ. Utinggbọ njem na-ejikarị eme ihe mgbe ịmalite, mechie, ma ọ bụ daa.
Ọnọdụ ọrụ a na-ahụkarị dị ka valvụ na-agbanwe agbanwe bụ usoro enyemaka mgbali. A na-etinye valvụ enyemaka abụọ ahụ n'otu valvụ ụwa nwere ụzọ atọ, na-ekwe ka valvụ nke ọzọ rụọ ọrụ nke ọma mgbe otu n'ime ha chọrọ iche ma ọ bụ ọrụ. N'ihi usoro dị n'ime ya, valvụ ụzọ ụwa atọ nwere nnukwu nkwụsi ike. Mgbanwe nke ndu nke mmiri ahụ ga-emepụta ike mmeghachi omume dị ukwuu na nnukwu dayameta ụzọ ụzọ atọ nke ụwa.
Ahụ nke tee - ụzọ ụwa valves na-abụkarị nkedo ígwè ma ọ bụ alloy nchara. Valves eji na ike osisi na-butt-welded iji merie leakage nsogbu kpatara flanged njikọ.